Home News RW Kheyre Sharci ha ka Sameeyo Boobka ku socda Dekadaha Soomaliya
RW Kheyre Sharci ha ka Sameeyo Boobka ku socda Dekadaha Soomaliya
R/Wasaare Kheyre ayaa maanta qaaday tallaabo aad u wanaagsan oo uu kaga dayday madaxweynihii hore ee Somaliya mudane Xasan Sheekh. R/Waasre waxaa bannaaka iska dhigay heshiiskii aan sharciga ahayn ee Imaaraadka iyo Itoobiya soo maleegeen , kaas oo ujeedadiisu tahay in laguala wareego maamulka iyo ka macaashka dekadda ka mid ah dalka.
R/Wasaare kheyre oo qaaday tallaabo wanaagsan waxaa uu iska fogeeyey inuu raad ku lahaa, waxna ka ogaa heshiiskaas lagu saxeexay dalka Imaraadka isagoo booqasho rasmi ah dalkaas ku maraya.
Haddaba hadalka R/Wasaaraha waxaa uu daba joogay waraaq geesinimo iyo waddaniyad buuxda leh oo ay qortay wasiirka wasaaradda Gaadiidka iyo Dekadaha ee Somaliya Marwo Maryan Aweys. R/Wasaaraha oo sheegtay inuu isaga lahaa amarka waraaqdaas waxa hadda looga fadhiyaa inuu sharci ka sameeyo dhammaan dekadaha loo qorya guranayo isla markaana uu Barlamaanka u gudbiyo hindise sharciyeedkaas.
Haddii uu tallaabadaas qaado R/wasaare Kheyre waxay mugdiga ka saareysaa inuusan waxba ka ogeyn heshiiska oo lala eegtay in heshiiska lagu soo beego booqashadiisa. Haddiisa uu ka aamuso ama intaas ku daayo waxaa iska caddan noqoneysa malaha dad badan ay qabaan oo ah inuu wixiisa qaatay kadibna qoraalka wasiirka oo ka horreeyey uu kula daartay, si uu isu badbaadiyo.
Arrintaan sida ku cad waraaqda wasiirka waa khater qaranimada dhaawaceysa waana hawl u baahan inay dawladda Kheyre ka sameyso sharci boobkan lagu horjoogsanayo si loo ilaaliyo masiirka iyo qaranimada dalka.
MOL waxay u hambalyeyneysaa taallabada qiimaha leh ee ay xukuumadda maanta qaaday gaar ahaan geesinimada ay muujisay wasiirka Gadiidka iyo dekadaha iyo R/wasaaraha Jamhuuriyadda oo isagana awood u yeeshay inuu cadeeyo mowqifkiisa sidii ay horayba u cadeeyeen madaxdii ka horreysay ee arintaan ka hadashay. Waa dhab ma fududa oo walaalaha waqooyi ayaa dan u arka jidkaan laakiin walaal khater laguma sii deyn karo ee waa in loo dardaar wariyaa dawladda federaalkana gacmo debecsan xaalka ha ku dhaqdo.